युट्यूबमा "मलाई मनपर्ने भिडियोहरू" विकल्प कसरी पहुँच गर्ने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
युट्यूबमा "मलाई मनपर्ने भिडियोहरू" विकल्प कसरी पहुँच गर्ने?
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 373
यूट्यूब प्लेटफर्म एक शामिल विकल्पले हामीलाई "मनपराएको" सबै भिडियोहरूको पूर्ण सूची हेर्न हामीलाई अनुमति दिन्छ। यो सूची पहुँच गर्नका लागि, हामीले केवल मेनूमा रहेको "मलाई मनपर्ने भिडियोहरू" बटन क्लिक गर्नुपर्नेछ।
तर यदि तपाईंलाई थाहा छैन कि यस विकल्पलाई कसरी पहुँच गर्ने हामी तपाईंलाई निम्न लेख पढ्न आमन्त्रित गर्दछौं जहाँ हामी तपाईंलाई चरण-चरण देखाउँनेछौं जुन तपाईंले आफ्नो युट्यूब खातामा मन पराउने भिडियोहरूको सूची अवलोकन गर्न तपाईंले अनुसरण गर्नुपर्छ।
विकल्पहरू "मलाई मनपर्ने भिडियोहरू" पहुँच गर्न चरणहरू
यूट्यूब प्लेटफर्मको प्रयोगकर्ताहरूले भिडियोको सूची प्रविष्ट गर्न सक्षम हुनेछ जुन म धेरै मन पराउँछु डेस्कटप संस्करणबाट साथै मोबाइल उपकरणहरूको लागि अनुप्रयोगबाट। दुबै केसहरूमा प्रक्रिया एकदम सरल र छिटो छ।
विधि १: डेस्कटप संस्करणबाट
के तपाइँ YouTube मा "मनपर्‍यो" कुन भिडियो जान्न चाहानुहुन्छ? तपाईं यसलाई एक लोकप्रिय सजिलो तरीकाले यो लोकप्रिय स्ट्रिमि video भिडियो प्लेटफर्मको डेस्कटप संस्करणबाट गर्न सक्नुहुन्छ।
हामीले गर्नै पर्ने पहिलो कुरा हो यूट्यूब प्लेटफर्म पहुँच गर्नुहोस् हाम्रो कम्प्युटरबाट। तपाईंले भर्खर ब्राउजर खोल्न र तलको वेब ठेगाना लेख्नुपर्दछ www.youtube.com
एक पटक प्लेटफर्म भित्र हामी संग छ हाम्रो ईमेल र पासवर्डको साथ लग इन गर्नुहोस्। अब हामी तीन तेर्सो पट्टिहरुमा थिच्दछौं जुन स्क्रीनको माथिल्लो बायाँ भागमा देखा पर्दछ र "लाइब्रेरी" विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
पृष्ठको अन्त्यमा तपाइँ "शीर्षकको साथ एक खण्ड पाउनुहुनेछ।भिडियोहरू मलाई मनपर्दछ"। त्यहाँ, पूर्ण सूची देखा पर्नेछ सबै प्लेटफर्मको साथ जुन तपाईं प्लेटफर्ममा "मनपराउनु भयो"। पूर्ण सूची पहुँच गर्न तपाईले "सबै हेर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुपर्नेछ।
"मलाई मनपर्ने भिडियोहरू" मा क्लिक गर्नुहोस्
त्यहाँ धेरै सजिलो र अधिक सीधा तरीका छ भिडियोहरूको सूची पहुँच गर्न जुन मैले यूट्यूबमा मनपर्दछ। यहाँ हामी यसलाई तपाईलाई व्याख्या गर्दछौं।
क्लिक गर्नुहोस् तीन तेर्सो पट्टि (माथिल्लो बायाँ कुना) माथि
विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् "भिडियोहरू मलाई मनपर्दछ"
तयार। तपाईं पहिले नै प्लेटफर्ममा मनपर्ने सबै भिडियोहरूको सूची पहुँच गर्नुहुनेछ।
विधि २: मोबाइल अनुप्रयोगबाट
प्रयोगकर्ताहरू जसले मोबाइल अनुप्रयोगबाट युट्युब प्रवेश गर्दछन् उनीहरूले प्लेटफर्ममा मनपराइएको भिडियोहरूको सूचीमा पहुँच गर्न सक्दछन्। यहाँ छन् पछ्याउनको लागि चरणहरू:
सबै भन्दा पहिले तपाईं पर्छ युट्यूब अनुप्रयोग खोल्नुहोस् तपाईंको मोबाइल उपकरणमा। यदि तपाईंसँग खुला सत्र छैन भने, केवल तपाईंको ईमेल र पासवर्ड संकेत गर्नुहोस्।
स्क्रिनको तल्लो दायाँ कुनामा तपाईले "को नामको एक विकल्प फेला पार्नुहुनेछ।Biblioteca"। तपाइँले भर्खरको भिडियो र प्लेलिस्टहरूको सूची पहुँच गर्न त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्नेछ।
तल तपाईले विकल्प पाउनुहुनेछ “भिडियोहरू मलाई मनपर्दछ"। यो ट्याप गर्नाले तपाईंलाई मनपर्ने सबै YouTube भिडियोहरूको साथ पृष्ठ खुल्नेछ।
1 विकल्पहरू "मलाई मनपर्ने भिडियोहरू" पहुँच गर्न चरणहरू
2 विधि १: डेस्कटप संस्करणबाट
3 "मलाई मनपर्ने भिडियोहरू" मा क्लिक गर्नुहोस्
4 विधि २: मोबाइल अनुप्रयोगबाट
कसरी एक व्यवसाय खाता परिवर्तन गर्न को लागी निजी मा Pinterest?
म कसरी मेरो Pinterest खाता मेटाउने वा निस्क्रिय गर्ने?